Osimiri Woolacombe, osimiri osimiri UK | Akụkọ Njem
Osimiri na Resorts | | United Kingdom
Anyị anaghị agakarị mpaghara dị ka United Kingdom ma ọ bụ Scotland ịhụ osimiri, n'ihi na ihu igwe anaghị adịkarị mma. Mana nke a apụtaghị na ha abụghị ebe ị ga - ahụ ebe dị egwu ma maa mma maka aja ị nwere ike iji. Osimiri Woolacombe Ọ bụ otu n’ime osimiri ndị ahụ dị ịtụnanya.
A na-ewere osimiri a dị ka otu n'ime ihe kachasị mma United Kingdom, yabụ na ọ bụ ebe anyị ga-aga ma ọ bụrụ na anyị nọ ezumike. Agbanyeghị, dịka anyị kwurula, ihu igwe anaghị esokarị, ọ bụ naanị n'oge ọkọchị. Agbanyeghị, ọ bụghị naanị ebe anwụ na-acha, n'ihi na ịma mma ya bụ ihe na-adọrọ mmasị n'onwe ya.
Osimiri a bụ nnọọ oke aja, nke dị kilomita ise n'ogologo na obosara nke ukwuu, ya mere ọ ga-ekwe omume ịhụ ndị mmadụ n'afọ niile, ma ha na-eje ije, na-agba ọsọ ma ọ bụ na-ezu ike na ọnọdụ eke. Ala gbara ya gburugburu ma nwekwa mpaghara ụfọdụ nwere ụlọ, mana n'ozuzu enwere ebe dị iche na nke onwe ya, nke dị mma maka ndị hụrụ obi iru ala.
Osimiri a dị n'ógbè Ugwuoba, ma nyekwa ya ọkọlọtọ na-acha anụnụ anụnụ. Ọ bụ ebe dị mma maka ezinụlọ na ndị na-eri mmiri, ọ ghọwokwa ebe a na-enwe egwuregwu na ụbọchị ole na ole anwụ na-acha n'oge ọkọchị. N'oge dị elu, ha nwekwara ọrụ nchekwa na ọrụ nchekwa.
Ọ bụ osimiri osimiri n'ihi na ọ dị jụụ, a na-agwa ya nke ọma na enwere mpaghara nwere mmiri na-adịghị mma ma na-emighị emi. Mana ọ bụ ndị maara nke ọma mara ya, ebe enwere asọmpi mba ụwa na ya. O nwedịrị ụlọ akwụkwọ ga-amụta ịkụ egwuregwu a. Iji ruo ebe ahụ enwere bọs na nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala na mpaghara ahụ, na-enwe ohere ịnweta ihe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » United Kingdom » Woolacombe Beach, osimiri UK
Osimiri 3 kacha elu na Jamaica
Hyams Beach, aja aja aja ọcha